Takooridda iyo midab-takoorka - InfoFinland
Nolosha Finland > Xaaladaha dhibka > Takooridda iyo midab-takoorka
Sida waafaqsan dastuurka Finland waa in dadka loo tixgeliyaa si sinnaan ah iyadoon loo eegeyn asalkiisa iyo jinsigiisa. Takoorka (Syrjintä) waa denbi.
Waa maxay takoor?
Takooristu waxaa looga jeedaa kala darejeyn tixgelin, taasoo qofna lagu xumeeyo qofna lagu wanaajiyo arrin isku mid ah. Takoorkistu way ahaan kartaa tusaale mid lagu takooro qofka asalkiisa, jinsiyadiisa iyo diintiisa.
Takooristu wey ahaan kartaa hanjabaad, cadowtinimada, yasitaanka ama bahdil ku sameynta. Takooristu wey ahaan kartaa in qof uu qof kale u amro ama u hago si takooris ah.
Takooristu waxay ahaan kartaa tusaale in, haddii aad ku weyso adeeg asalkaaga dartiis ama lagu xujeeyo warysiga dalbashada shaqo inaad u taqaaano afka finnishka si buuxd , iyadoon aheyn qabashada shaqada iney u baahan tahay aqoon luuqada ah.
In loola dhaqmo dadka si kala duwan, ma aha macnaheedu had iyo goor takooris. Dadka waa kala tixgelin duwanaan karaan, haddey jirto sabab macquul ah.
Qodobka sinnaanta ayaa qeexaya, waa maxay takoorka.
Qodobka sinnaanta ayaa diidaya ku takoorista da’da, asalka, jinsiyada, luuqada, diinta, cibaadadda, fikirka, howlaha siyaasinimo, howlaha ururka shaqaalaha, aalada qoyska, xaalad caafimaad, naafonimada, lagaroonimada ama waxyaalo kale oo shaqsi la xiriira. Qofna ma aha in laga dhigo inuu qof kale ka liito arrimahaas dartood.
Qodobka sinnaanta ayaa diidaya ku takoorista jinsiga dartiis.
Bogga InfoFinland Sharciyada iyo xuquuqda waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan xuquuqdaada Finland.
Macluumaad ku saabsan takooriddaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Cunsuriyadda iyo dembiyada kale ee cadaawadda
Dembiga cadaawaddu waa dembi, kaas oo ay sababtiisu tahay iska sii necbaansho ama cadaawadnimo ku wajahan sifo gaar ah oo dhibanuhu leeyahay darteed. Sifooyinkan waxay noqon karaa asalka uu qofku ka soo jeedo, diinta, cibaadada, jihaysiga jinsiyeed, aqoonsiga jinsiyeed, muujinta jinsiga, dhaawac ama sifo u dhigma. Dembiga cadaawadda waxaa loo geysan karaa qof, koox, hanti, urur ama wakiladooda. Dembiga cadaawaddu wuxuu noqon karaa tusaale ahaan xoog-sheegasho, ku xadgudub sharafeed, takoorid, hanjabaad, dhibitaan ama waxyeelleyn. Haddii laguu geysto dhib cunsuriyad ah wargeli arrinka booliiska.
Bogga InfoFinland Dembiyada waxaad ka helesyaa macluumaadka ku saabsan, sida aad wargelinta dembiga u sameyn karto.
Caawimaad loogu talagalay dhibanayaasha takoorka
Takooris goobta shaqada
Haddii aad dareemeyso goobta shaqada takooris, la xariir marka hore maddaxa shaqadaada. Haddii aadan caawimo ka helin, la xiriiir markaa xaquuq dhowraha shaqadaada (työsuojeluvaltuutettu) ama dandhowraha shaqaalaha (luottamusmies). Haddii arrinkii ku xalismi waayo goobtii shaqada la xiriir nawaaxigaaga badbaadadda shaqaalaha työsuojelupiiriin ama urrrurka shaqaalaha aad xubinta ka tahay.
Bogga InfoFinland Sinnaan iyo cadaalad xagga shaqada ah, waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan waxa loola jeedo sinnaanta iyo cadaaladda marka la joogo goobta shaqada.
Bogga InfoFinland Dhibaatooyinka nolosha shaqada waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan dhibaatooyinka caamka ah ee nolosha shaqada la xiriira iyo sida aad caawimaad ugu raadsan karto.
Talobixinta ka dhanka ah takoorka
Haddii aad ka shakiso in lagu takooray, waxaad la xiriir kartaa talobixinta ka dhanka ah takoorista ee Heeganka dhibanaha dembiga. Talobixinta ka dhanka takoorku waxey ku shaqeysaa telefoonka. Macluumaadyada xiriirka ee talobixinta waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ee Heeganka dhibanaha dembiga.
Talobixinta ka dhanka ah takoorkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Wakiiladda sinnaanta u dooda
Haddii aad kala kulanto takooris meelo kale oon aheyn goobta shaqada ama aad dareento takooris, waxaad la xiriirtaa u doodayaasha sinnaanta (yhdenvertaisuusvaltuutettu). Waad ula xiriiri kartaa xitaa dad kale ama horin kale adigoo matalaya.
U doodayaasha sinnaanta waa masuul maddax banaan, kaasoo howshiisu tahay horumarinta sinnaanta iyo inuu wax ka qabto wixii takooris ah. U doodayaasha sinnaanta waad ka heli kartaa hagmo, talo iyo weliba inuu kaa caawiyo sidii xal lagu heli lahaa iyo wixii talo ee ku aadan arrinkaas, wixii la xiriira takoorista. U doodaha sinnaanta wuxuu sharxaad ka weydiin karaa inuu ka bixiyo takoorista ruuxa lagu tuhmayo. Waxaa intaa dheer oo la sameyn karaa in arrinkii la hor geeyo Gudigga u doodayaasha sinnaanta ama maxkamad.
Ballanta waa inaad qabsataa wakhti hore. Adeega xafiisku waa lacag la’aan. Haddii aadan garaneyn luuqadaha finnishka, iswiidhishka ama ingiriiska iimeylka ama qoraal waad ku soo diri kartaa luuqad kale. Macluumaadyada xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Wakiiladda sinnaanta u dooda.
Gudigga u doodayaasha sinnaanta
Haddii aan laguu geysan takooris, waad la xiriiri kartaa xitaa gudiga sinnaanta iyo – cadaalada (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta). Gudigu waxay xaliyaan codsiyada la xiriira takoorista weyna kahortagaan takoorka. Waxaa intaa dheer iney ku ganaaxaan ganaax hanjabaad, taasoo looga hortagayo takoorka. Sidoo kale gudiggu waxay ansixin karaan heshiiska labada dhinac. Gudiggu howshooda ma aha takoorika arrimaha la xiriira goobaha shaqada.
Ku caawinta xaaladaha takooridaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Sami
Haddey kula soo gudboonaato takooris ama cunsuriyeen, waxaad talosiin iyo caawinadba ka heli kartaa ururada ajaaniibta. Xogta ururada ajaaniibta waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ururada.